China Isinyathelo Indexable Index Drill ifektri abakhiqizi | UDeshen
Amathuluzi we-Step and Pilot angafakwa esicelweni sokuqeda imisebenzi emibili noma emithathu elandelayo emgodini owodwa. Ukusetshenziswa kwethuluzi lesinyathelo kunciphisa ngokumangazayo isikhathi somjikelezo, islahla, nokuqina phakathi kobubanzi.
Izinyathelo zokuzivivinya zinemikhawulo yokukhiqiza kuye ngobubanzi obukhulu bezinyathelo ezinyathelweni. Ukuthuthuka okukhethekile kwe-carbide kwesinye isikhathi kungadingeka ngenxa yendawo yomgodi opholile. Ngokwengeziwe, ama-chip breakers angadingeka ngenxa yokushoda kwe-engeli yangaphakathi evala futhi iphule ama-chips ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Ngokufanelekile ukusebenzisa lolu hlobo lwe-drill isivuno cishe asikho ukwehluka phakathi kwamadayimitha.
Kusetshenziswa izivivinyo zokushayela ezingezona ukusika ukulandela imbobo esivele ikhona ngenkathi kusikwa ubukhulu obukhulu nokunciphisa izikhathi zomjikelezo kanye nokunciphisa ukweqa phakathi kwezimbobo.
I-MULTI-DIAMETER STEP GUNDRILLS
Izingxenye eziningi zidinga izimbobo zosayizi ezimbili, ezintathu, noma ezine ngobukhulu obubodwa. Izicelo ezithile zingavumela i-gundrill eyodwa yobubanzi obuningi ukukhiqiza yonke noma eminye yale migodi, kunciphise isikhathi semishini. Amathiphu e-carbide aqinile aphansi ukuphrinta ukubekezelelana okuvumela ubukhulu bama-diameters amaningi ukuthi akhiqizwe ngokudlula okukodwa.
Langaphambilini Ibha eyindilinga imishini yomgodi ojulile